Serasera.org - Blog: août 2003
Manomboka izao dia afaka mampiseho ny fihetsem-pontsika amin'ny alalan'ny sary kely isika rehefa mandefa hafatra. Andramo ao e. :)
Mazotoa ary mitsiky sy mihomehy :lol:
Publié par Eugene Heriniaina à 8/30/2003 11:55:00 AM Aucun commentaire:
Vita indray ny fampidirana sarin'ny mpihira ao amin'ny Tononkira (http://tononkira.serasera.org). Afaka ary amporisihana mba hampiditra sarin'ny mpihira ao ny namana. Marihana fa ny namana ihany no afaka mampiditra sarin'ny mpihira sy mijery ny sarin'ny mpihira rehetra.
Publié par Eugene Heriniaina à 8/30/2003 11:08:00 AM Aucun commentaire:
Naka mpanisa vaovao izahay nanomboka omaly 13-aog. BBClones no anarany. Lasa tsy maimaimpoana intsony mantsy ilay lohamilina nanisa ny mpamangy eto amin'ny site koa dia nialàna. Ny isan'ny mpamangy hitanareo ery ambany ery izany dia nanomboka ny 13 aogositra 2003. Mahaliana ny mijery ny tohiny satria hita ao hoe avy aiza ny ankamaroan'ny namana sy ny sisa. Mba jereo eo moa dia ho hitanao.
Publié par Eugene Heriniaina à 8/14/2003 11:07:00 AM Aucun commentaire:
Aelezo sy ampitampitao
Amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny 1500 ny namana mpikambana ato amin'ity site ity. Isaorana antsika rehetra izany. Natao maimaim-poana ary ho maimaim-poana (gratuit) hatrany ny zavatra rehetra rehetra eto. Mba hanampiana ny site anefa dia mila ny fitokisan'ireo mpanao dokam-barotra sy mpanohana isika. Ny antoka ho azy ireo dia hoe mitombo isa ny namana. Koa raha te hanampy ny namana isika dia aelezo sy ampitampitao ny momba ity site ity. Lazao any am-pianarana, any am-piasàna, any amin'ny cybercafé rehetra any. Mba ho maro isa ny namana. Izahay koa hiezaka hanatsara hatrany ny vokatra eto araka izay tratra.
Mety hanampy ny namana ihany koa ny fifidiananao azy ho anisan'ny site mendrika amin'ity concours eto ambany ity.
:: Concours ao amin'ny Latoilemalagasy.net ::
Averimberina ihany fa mandray anjara amin'ny fifaninanana ataon'ny Latoilemalagasy.net ny site Namana. Azonao jerena eto ambany eto ny toerana fifidianana. Dia azonareo fidina ao ny Namana raha toa ka mahafa-po anareo ny site.
Jereo eto ambany ary.
Publié par Eugene Heriniaina à 8/07/2003 10:57:00 AM Aucun commentaire: